मोबाइलको ब्लुटुथ अन् नराख्नुहोस है, नत्र ह्याकरको निशानामा पर्नुहोला | युनिभर्सल खबर
Home प्रबिधि मोबाइलको ब्लुटुथ अन् नराख्नुहोस है, नत्र ह्याकरको निशानामा पर्नुहोला
मोबाइलको ब्लुटुथ अन् नराख्नुहोस है, नत्र ह्याकरको निशानामा पर्नुहोला
Posted By: युनिभर्सल खबरon: September 28, 2017 In: प्रबिधि
सेक्युरिटी कम्पनी अर्मिसका शोधकर्ताहरुले ब्लुटुथसँग जोडिएका डिभाइसहरुमा हमला गर्न एक मालवेयर पत्ता लगाएका छन् । ब्लुटुथयुक्त डिभाइसमा हमला गर्ने मालवेयरको नाम ब्लुबर्न हो । यसको माध्यमबाट ह्याकरले ती डिभाइसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्दछ जसको ब्लुटुथ अन हुन्छ । ब्लुटुथमार्फत डिभाइसमा आक्रमण गरिसकेपछि ह्याकरले मोबाइल फोन वा अन्य स्मार्ट डिभाइसका डाटाहरु चोरी गर्न सक्दछ ।
अर्मिसका अनुसार ब्लुटुथ डिभाइससँग सम्बद्ध अन्य कैयन् भाइरसहरु समेत हुनसक्छन्, जो अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन । तर पत्ता लागेका केही खतरनाक भाइरस चाहीँ यी हुन्ः
यसको मालवेयरको आक्रमण निकै गम्भीर हुनसक्दछ । यो बगले ब्लुटुथको फाइदा उठाएर हमला गर्दछ । ब्लुबर्न यहीँ श्रेणीमा पर्दछ । यसको माध्यमबाट साइबर अपराधीले भाइरस पठाएर डाटा चोरी गर्न सक्दछ । ब्लुबर्नलाई प्रयोगकर्ताको सहमतिको आवश्यकता पर्दैन र उसले कुनै लिंकमा क्लिक गर्न पनि भन्दैन । केवल १० सेकेण्डमा ऊ कुनै सक्रिय ब्लुटुथ डिभाइसलाई नियन्त्रण लिन सक्दछ । अर्मिसले एउटा यस्तो एप्लिकेसन बनाएको छ जसले तपाइँको डिभाइस सुरक्षित छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउँदछ । यो एप्लिकेसनको नाम ब्लुबर्न भल्नराबिलिटी स्क्यानर हो । यो एप गुगलको अनलाइन स्टोरमा उपलब्ध छ ।
अर्को खतरा हो ब्लु ज्याकिङ । यो ब्लुटुथसँग जोडिएका कैयन् डिभाइसमा एकसाथ स्पाम पठाउन सक्दछ । यसले पर्सनल इलेक्ट्रिक कार्डको माध्यमबाट मेसेज पठाउँदछ, जुन एक नोट वा कन्ट्याक्ट नम्बरको रुपमा हुन्छ । आमरुपमा यसले ब्लुटुथ डिभाइसको नाममा स्पाम पठाउँदछ ।
यो ब्लुज्याकिंग भन्दा पनि खतरनाक छ । यसको माध्यमबाट सूचनाहरुको चोरी हुन्छ । यसको प्रयोग मूख्यरुपमा फोनबुक तथा डाटा चोरी गर्नका लागि गरिन्छ । यसको माध्यमबाट निजी मेसेज तथा तस्वीर पनि चोरी गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि ह्याकरलाई प्रयोगकर्ताभन्दा १० मिटरभित्रको दूरीमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
कसरी सुरक्षित रहने ?
· माइक्रोसफ्ट, गुगल तथा लिनक्सले ब्लुबर्नबाट प्रयोगकर्तालाई जोगाउनका लागि प्याच रिलिज गरेका छन् । त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् ।
· आधुनिक उपकरणमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीका लागि कन्फर्मेसन कोड आवश्यक हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
· मोड टू ब्लुटुथको प्रयोग गर्नुहोस्, यो धेरै सुरक्षित छ ।
· आफ्नो डिभाइसको ब्लुटुथ नाम हिडेन मोडमा राख्नुहोस् ।
· प्रयोग नहुने बेला डिभाइसको ब्लुटुथ अफ गर्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड फोनको ‘ब्याट्री लाइफ’ बढाउने तरिका
घुम्न आउनेलाई क्षणभरमै करोडपति बनाइदिने अचम्मको पार्क !
बिज्ञानलाई ठुलो क्षति, रहेनन् सताब्दीकै महान बैज्ञानिक स्टीफिन हकिंग
साँचो समाचार भन्दा झूटो समाचार छ गुणा चाँडो फैलिने अध्ययनले देखायो
सेक्स रोबोट ‘हार्माेनी’ले भुलाउनेछ दुनियाँलाई (भिडियो सहित)